अभिमत: सबैभन्दा बढी अध्ययन गर्ने नेता को होला ?
सबैभन्दा बढी अध्ययन गर्ने नेता को होला ?
प्रमुख दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतामध्ये सबैभन्दा बढी अध्ययन गर्ने नेता को होला तपाईंलाई थाहा छ ? छैन भने थाहा पाइराख्नुहोस् । माओवादी र एमाले अध्यक्ष क्रमशः प्रचण्ड र झलनाथ खनालले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् भने कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आइएसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
बालकृष्ण, रामशरण, नेत्र/नयाँ पत्रिका
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 9:48 PM